RASMI: UEFA Oo Shaacisay Xidiga Ku Guulaystay Goolkii Ugu Quruxda Badnaa Kulamadii Saddexaad Ee Champions Leaque – WWW.Gool24.net
RASMI: UEFA Oo Shaacisay Xidiga Ku Guulaystay Goolkii Ugu Quruxda Badnaa Kulamadii Saddexaad Ee Champions Leaque
23/10/2017 Mahamoud Batalaale
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa hadda si rasmi ah ugu dhawaaqay xidiga ku guulaystay goolkii ugu quruxda badnaa goolkii usbuuca ee Champions Leaque ee kulamadii saddexaad dhawaan la ciyaaray iyada oo codbixintii jamaahiirta kubbada cagta aduunku ay go’aamiyeen xidiga guulaystay.
UEFA ayaa hore shaacisay liiska xidigaha ku tartamayay goolkii ugu quruxda badnaa kulamadii saddexaad ee Champions Leaque ee talaadadii iyo arbacadii la soo dhaafay la ciyaaray. Laakiin codbixin maalmo socotay kadib waxaa lagu dhawaaqay xidiga guulaystay.
Xidiga kooxda AS Roma ee Edin Edin Dzko oo laba gool ka dhaliyay kulankii Chelsea ayaa noqday xidiga goolkiisii cajiibka ahaa ee Stamford Bridge loogu codeeyay goolkii ugu quruxda badnaa goolashii kulamadii saddexaad ee Champions Leaque.
Waxa Edin Dzko abaal marinta goolkan ku garaacay David Liuz oo isna kulankii AS Roma ka dhaliyay gool cajiib ah isaga oo Chelsea u u saxiixay goolkii kowaad ee kulankii Stamford Bridge.
Xidigaha kale ee liiskan ku jiray ee Edin Dzko codbixintii la sameeyay uu ku garaacay waxaa ka mid ah Edin Dzko oo isna kulankii Stamford Bridge ka dhaliyay gool cajiib ahaa si la mid ah xidiga kooxda Juventus ee Pjanic ayaa isna gool qurux badan ka dhaliyay kulankii Sporting Lisbon ee Turin ka dhacay wuxuuna qayb ka ahaa xidigaha ay UEFA shaacisay in ay u tartamaayeen goolkii ugu UCL ee kulamadii la soo ciyaaray.
Waxa kale oo liiskan ku jiray Xhaka oo gool uu ka dhaliyay CSKA Moscow liiskan ugu soo baxay isaga oo ka tirsan kooxda Basel halka Glushakov uu isna ka dhaliyay gool kooxda Sevilla uu liiskan ugu jiray wuxuuna ka tirsan yahay kooxda Spartak Moscow laakiin dhamaantood Edin Dzko ayaa ka guulaystay.